လစဉ် အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စခြင်း ရရှိမှု/မရရှိမှု တို့အတွက် ကျွန်ုပ်ကို အသိပေးမည်လား?
ဟုတ်ကဲ့။ သင်၏ လျှောက်ထားမှုအခြေအနေအတွက် SMS ရရှိပါလိမ့်မည်
GX30 အစီအစဉ် အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မစနိုင်နိုင် ဘာဖြစ်မည်လဲ
အကောင့်ထဲတွင် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေ မရှိပါက သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမရှိပါက အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မစနိုင်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက နောက်တစ်နေ့တွင် ထပ်မံကြိုးစားပါမည်
အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စခြင်းအား ရပ်နိုင်ပါသလား?
အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စခြင်းအား ရပ်ရန် UMB မှတစ်ဆင့် *118*1*4# သို့ ခေါ်ဆိုပါ
ဝန်ဆောင်မှုမရှိချိန်တွင် GX30 ကို လျှောက်နိုင်ပါသလား?
မရပါ၊ ဝန်ဆောင်မှုမရှိချိန်တွင် GX30 ကို မလျှောက်ထားနိုင်ပါ
ဝန်ဆောင်မှုမပေးချိန်တွင် GX30 ကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စပါမည်လား?
မစပါ၊ ဝန်ဆောင်မှုမပေးချိန်တွင် gx30 ကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မစပါ
အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စရန် ပထမအကြိမ်ကြိုးစားမှု မအောင်မြင်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားမှုတွင် ရရှိသွားပါက မသုံးဘဲကျန်နေသော မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင် ကိုယ်တာလက်ကျန်တွေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ?
ပထမအကြိမ်ကြိုးစားမှု မအောင်မြင်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားမှုတွင် ရရှိသွားသည့်တိုင် မသုံးဘဲကျန်နေသော မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင် ကိုယ်တာလက်ကျန်များကို ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်
အသစ်ပြန်စရန် ထပ်မံကြိုးစားမှုသည် ဒုတိယအကြိမ်တွင်လည်း မရပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း (ဝန်ဆောင်မှုများကို အသစ်ပြန်စရန်)?
သင့်လျောက်ထားမှုကို အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ကာ မသုံးဘဲကျန်နေသော မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင် ဒေတာလက်ကျန်များကို ပယ်ဖျက်သွားပါမည်
GX30 ကို စတင်သုံးရန် အကြိမ်ကန့်သတ်ချက် ရှိပါသလား?
မရှိပါ၊ စတင်သုံးရန် အကြိမ်ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ
မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်ဒေတာအတွက် လစဉ်ကိုယ်တာအပြင် နောက်ထပ် မည်သို့ ထပ်ရယူနိုင်သနည်း?
သင်သည် Hotspot Booster အတွက် RM3 ပေးပြီး မြန်နှုန်းကန့််သတ်ချက်မရှိသော မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်ကိုယ်တာကို3ရက် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ယခု ထပ်ဆောင်းအပိုကို GX30 အစီအစဉ်ဖြင့်သာ ရနိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်၏ ကန့်သတ်မဲ့ဒေတာအတွက် မြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့။ သင်၏ ကန်ု့သတ်မဲ့ဒေတာအတွက် မြန်နှုန်းမြှင့်နိုင်ပါသည် (ဗီဒီယိုနှင့် တေးဂီတ အပါအဝင်)၊ Turbo Booster ကို သုံးပါက RM5 ကျသင့်ပြီး 24 နာရီ သုံးနိုင်ပါသည်။ ယခု ထပ်ဆောင်းအပိုကို GX30 အစီအစဉ်ဖြင့်သာ ရနိုင်ပါသည်